VaChamisa Vanotadza Kuenda kuChegutu Kwavanga Vakatarisirwa
Zvita 07, 2019
Mutungamiri webato reMDC, VaNelson Chamisa, vatadza kuenda kumusangano webato ravo kuChegutu, uko vanga vakatarisirwa kunge vari neMugovera.
Asi musangano uyu waenderera mberi hawo zvisineyi kuti VaChamisa vanga vasipo.
Vachitaura kuvanhu vanga vari munhandare yePfupajena muChegutu, nhengo yeNational Council yeMDC, uye vachimirira Highfield West muHouse of Assembly, VaHappymore Chidziva, vaudza vatsigiri vavo kuti VaChamisa vatadza kuuya nekuti vari kunze kwenyika uko vari kuita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica neEurope.
Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti VaChamisa vatadza kuuya nekuda kwemakakatanwa ari mubato zvikuru sei kurongwa kwakaitwa musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vashoma.
Mashoko aya anoratidza kuti ndeechokwadi sezvo VaChidziva vazobvuma kuti VaChamisa vari munyika asi vari kuita mamwe mabasa patavabvudza mushure mukutaura kuvanhu.
Imwe nhengo yeMDC isina kuda kuzivikanwa nezita inoti vanhu vakawanda havana kuuya kumusangano uyu nepamusana pekusawirirana kunonzi kuri kuitika mubato iri.
Asi mukokeri wemisangano yeMDC mudunhu reMashonaland West, VaEdward Dzeka, vati kunetsana kuri mubato hakusi iko kwaita kuti pamusangano wavo pauye vanhu vashoma.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri waVaChamisa, Dr Nkululeko Sibanda, sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Sachigaro wevechidiki muMDC, VaObey Sithole, vatora mukana uyu kuudza vanga vari pamusangano uyu kuti hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa iri kuratidza kuti haina hany’a nevanhu, izvo zviri kuita kuti zvinhu zviome munyika.
Asi imwe nhengo yebato reZanu PF, VaTapiwa Chitate, vati bato ravo riri nani nekuti vatungamiri varo vanonoka kuuya kumisangano, asi vachizotaura nevanhu kwete zvaitwa nevatungamiri veMDC vave kutotadza kuenda kumisangano yavo nekuti vanhu vanenge vari vashoma.
VaChitate vatiwo hurumende yebato ravo iri kuedza napose painogona napo kugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Musangano waitwa kuPfupajena wanga wakanangana nekuudza nhengo dzeMDC mamiriro akaita zvinhu munyika uye zviri kuitwa nebato iri.
VaMnangawa Votarisirwa Kutaura kuMusangano weUnited Nations neChina Manheru